Urhulumente ukuthenga kwi-Russia - Russian abaqondisi-mthetho-Intanethi - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Urhulumente ukuthenga kwi-Russia relates uluntu ukuthenga kwi-Russia ngabo bonke governmental, jonga kwaye wobulali abasemagunyeniUrhulumente ukuthenga kwi-Russia limele omkhulu lenkqubo yomthetho budgetary ezingahlawulwayo. Umqulu urhulumente purchases yenza malunga ne- waka rubles ngowama- nowama- waka rubles ngo.  urhulumente purchases ndlela constantly modernized ngenxa utshintsho umthetho, enzima iinxenye kwaye ulwazi. Inkqubo-wonke ukuthenga attracts ukubonelelwa i-ingqalelo uluntu nezifundiswa, urhulumente kwaye abucala. Ukuphuhlisa inkqubo-wonke ukuthenga, sidinga ukukhumbula amava elidlulileyo. Kubalulekile kuba u-na imeko-bume ukwazi uphuhliso amathuba kweyakhe intsimi ka-umsebenzi. Ngeli xesha, omkhulu inani amaxwebhu baba amayelenqe, phakathi kwabo -PHEZULU kwaye -FZ. Ezi amaxwebhu baba yenzelwe ukuba babe isemthethweni qho ngonyaka kuba imisebenzi karhulumente ukuthenga. Nonetheless, ngeli iqonga akubanga ezifunekayo ukuze abambe amatsha na ethe-ethe xa bafakwe a ukuthenga umyalelo. Oku kwaba ngempumelelo olusetyenziswa yi-kwezoqoqosho agents kuba personal inzuzo (bona Urhwaphilizo), kwaye njalo ngakumbi additions ukuba isemthethweni isiseko baba kuyimfuneko. Yesibini eliqalela ku. Ngeli xesha, amaxwebhu asemthethweni -PHEZULU kwaye -FZ baba amayelenqe, ezaye babe isiseko soluvo ukumiselwa kwebandla bale mihla le ndlela kuba imisebenzi yoluntu procurements. I-aforementioned isemthethweni amaxwebhu regulated kuphela eshishini federal abathengi kwaye baba ukwakhela i-efanelekileyo yokusebenza bafakwe ukuze nkqubo. Lwesithathu eliqalela.
Ekuqaleni elandelayo kude kube ngowe-ukumiselwa kwebandla urhulumente ukuthenga ndlela enxulumene ne-ukuphunyezwa ye-federal umthetho -FZ.
Lo mthetho azisa ezininzi utshintsho kwinkqubo ukuthenga ukuze bafakwe, umzekelo, ukwaziswa zombane auction, exclusion ezimbini-iqonga umgaqo-nkqubo, ukungeniswa ingcamango ka-lokuqala (ubuninzi) isivumelwano kwexabiso. Ezivaliweyo ukuthenga nemigaqo-nkqubo baba prohibited, kunye exclusion ye-odolo constituting urhulumente secrets. A esinesiphelo uluhlu kwiimeko wenziwa, outlining xa umyalelo basenokuba wabeka nge omnye umthombo. Ukusetyenziswa qualification nkqubo yaba limited, ihamba kunye nezinye utshintsho. Federal umthetho -FZ uqalisa umkhosi. -Fechnology Z regulates imigaqo enxulumene forecasting kwaye ucwangciso-wonke kufuneka, kuquka kwempahla, iinkonzo, ukuthenga, ukuhlola, kwaye zophicotho-zincwadi. I-Zombane ukuthenga inkqubo kwi-Russia waba ungeniswa okokuqala ngowe, xa kwaba esetyenziselwa incidental, encinci tenders. Nangona kunjalo, akubanga kude kube ngo- ukuba transition kuqaliswe inkqubo ye ifaka umbala ukuba zombane tenders njengoko engundoqo ifomu ukwenza umsebenzi karhulumente ukuthenga. Ukususela ngoko, isabelo zombane tenders kwi-wonke ukuthenga candelo sele sele steadily ukwanda. Njengoko, ukuthenga ii-odolo baba ziyasetyenziswa ifomu i-zombane amatsha na ethe-ethe. Njengoko ka, kukho inkxaso eyomeleleyo kuba transferring - wonke ukuthenga ii-odolo kwi zombane ifomati. Eyona isiphumezi-miyalelo ukuxhasa le nkqubo ingaba ukwanda nokubandakanyeka thoba amazinga ka-urhwaphilizo enxulumene ne-zombane tenders. Kwi- Zonke-Russian Urhulumente Ukuthenga Foram kwi-Moscow, propositions zenziwa ukusebenzisa blockchain iteknoloji ukuze uluntu ukuthenga.
Ngowesine xesha ukusuka kwi- kweyomqungu yowama--langoku
Blockchain sele zivavanyelwe ubulunga ukuthenga ii-odolo ka-medicaments kwi-Novgorod oblast kwaye, ngokunxulumene Sergey Gorkov, 'yonke imibuzo malunga medicaments ingaba precise, cacisa, kwaye kakhulu olukhawulezayo ukusombulula'.
Njengenxalenye efanayo foram, intloko Federal Treasury (Russian:) Roman Artyukhin kwaziswa ukuba, iqala januwari, bonke iphepha ukuthenga ii-odolo iya kuba imbali.  Kwi-kowama- ingxelo nge-Andrey Khramkin, umlawuli we-Public Ukuthenga Institute, elandelayo amanyathelo kwi-inkqubo transition ukuba zonke-zombane ukuthenga indlela ingaba kuchazwe. Ziqhubele phambili uhlalutyo yombuso lwabiwo-mali, irhafu, abachopheli-kunye nezinye isiseko sedata kunye idata esuka idityanisiwe information system (ukuze nciphisa inani amaxwebhu iqhotyoshelwe ukuba sihlanganisa ii-bid kwaye ukuze kuphunyezwe inspections ka-authenticity ka-data ezibonelelwe ngu-nxaxheba). Nendalo jikelele idityanisiwe iqonga apho ingaba kusingatha zonke imeko kwaye kamasipala izinto kwaye izinto kuba zihanjiswe ngokunxulumene a competitive umgaqo-nkqubo (ukuthenga, privatization, ukuthengisa ukuqeshisa amalungelo, concession, njalo-njalo.) Isirashiya Federal Umthetho N. ifuna bonke federal, jonga kwaye kamasipala urhulumente abathengi apapashe lonke ulwazi malunga urhulumente tenders, auctions nezinye yokuthenga nemigaqo-nkqubo kwi-ezikhethekileyo-wonke urhulumente websites. Ngomhla we-juni Umthetho 'Kwi-Federal Contractual Inkqubo Ukuthenga Kwempahla, Imisebenzi Neenkonzo' weza phezulu okokuqala ekufundeni kuzo Urhulumente Duma. Lo mthetho usayilwayo lusekelwe elizeleyo indlela ukuthenga kwempahla, imisebenzi neenkonzo kuba urhulumente kwaye likamasipala kufuneka yi-forming i-federal contractual indlela. Ke, ngokukodwa, iqinisekisa the regulation of lonke ukuthenga emaphandleni: ucwangciso kwaye forecasting yombuso kwaye likamasipala kufuneka, forming kwaye bafakwe ii-odolo, ukwaneliseka ka-contractual izibophelelo kwaye uhlalutyo lomgaqo-iziphumo, ngokunjalo ukubek'esweni, ulawulo kunye zincwadi zangaphakathi ye-ngqwalaselo ka iimfuno. Lo mthetho usayilwayo amise inani-antayi-dumping amanyathelo kokwenza ukwaliwa izicelo kunye inordinately underestimated amaxabiso.  Xa kude kube ngoku kuphela additions zenziwa ukuba yoqobo umthetho, apho zithe iziphakamiso ka-rewriting umthetho wepalamente ngokupheleleyo, ukuze ngakumbi ngokuchanekileyo idilesi langoku-day iingxaki. Kumazwe amaninzi imithetho iimfuno okanye recommends abathengi kwaye abanikezeli ukuba ingaba eziqinisekisiweyo ukuthenga specialists. Ezikhethekileyo imfundo organizations unike isiqinisekiso, izifundo kwaye iisemina kwaye bavakalise iingcebiso kuba ezahlukeneyo ukuthenga nemigaqo-nkqubo. Kwi-Russia, numerous-wonke ukuthenga uphando amaziko zikho, nokunika amathuba ngakumbi uqeqesho kwaye iziqinisekiso ka-iingcali besebenza-wonke ukuthenga. Abanye lemfundo ephakamileyo amaziko, njenge RANEPA (Russian:), kanjalo kunikela izifundo kwaye iziqinisekiso kwi-wonke ukuthenga. Ngowe, I-Institute of Public kwaye Regulated Ukuthenga, Ukhuphiswano-Nkqubo kunye norhwaphilizo Ubugcisa (a. Uluntu Ukuthenga Institute) waba waseka. I-Institute imisebenzi njengoko a uphando, zemfundo, ingcali umbutho entsimini yombuso kwaye kamasipala ukuthenga, corporate nezinye urhulumente regulated purchases, kwaye wenziwe ukuba yinxalenye yoluntu norhwaphilizo umsebenzi. Urhwaphilizo ngu widespread kwi-yokwenene ebomini kwaye ngoku kanjalo kubalulekile a ethandwa kakhulu isihloko kwi-kwezoqoqosho uphando. I kwisithuba eli nqaku liza kuba ngomhla we-urhwaphilizo kwi-wonke ukuthenga kwi-isirashiya.
Mali Irhafu Deductions
bætur fyrir ósanngjarnt uppsögn - rússneska Lögfræðinga